टमाटरले एउटा होइन पाँच किसिमका क्यान्सरबाट रोक्छ – Nepal Trending
On ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १२:१७
एजेन्सी : यसमा सायदै कसैले शंका गर्ला कि फलफूलले हाम्रो स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ । हाम्रो राम्रो स्वास्थ्यका लागि फलफूल निकै आवश्यक हुन्छ । र, हामीले नियमित रुपमा फलफूलको सेवन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसो त हरेक फलफूल आआफ्नो प्रकृतिअनुसार निकै फाइदाजनक पनि हुन्छ । कतिसम्म भने कुनै फलफूलले पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्न सहयोग गर्छ भने कुनैले हाम्रो मुटु राम्रो राख्न वा आँखालाई तेजिलो राख्न । यस्तै एउटा सब्जी हो, टमाटर अर्थात् गोलभेँडा । तर, यसले एउटा मात्र फाइदा पुर्याउने होइन, यसले त हामीलाई पाँच विभिन्न किसिमका क्यान्सरबाट बचाउन सहयोग गर्छ ।
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरलाई मान्ने हो भने १०० ग्राम टमाटारमा ११० मिलिग्राम क्याल्सियम हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताले भनेका छन् कि टमाटर धेरै खाँदा क्याल्सियम र भिटामिन हाम्रो शरिरलाई मिल्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले प्रोस्टेट, ओभरी, फोक्सो, पेट तथा हड्डीको क्यान्सरबाट बच्न टमाटरको सेवन फलदायी हुनसक्ने बताएका छन् ।
नागदेवताको दर्शन गरि प्रेमलिला पढेमा सधै दिन राम्रो र नयाँ जोश मिल्नेछ !
यसकारण बढ्छ बिवाहपछि केटीहरुको तौल ! जानीराखौ
यी ४ राशिका महिला विवाह पछि श्रीमानको घरमा राज गर्छन् ! जानिराख्नुहोस्
यी चार राशि भएका मानिसहरू, जस्लाइ मनै पर्दैन कसैको साथ
आफ्नो प्रेमी-प्रेमिका माथि हैकम जमाउन माहिर हुन्छन् यी ४ राशि हुनेहरु, दबाउन समेत…